😸 အဓိပ္ပါယ်: ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာ Emoji အီမိုဂျီ ကူးယူပါ | Emoji အီမိုဂျီ အဘိဓါန် 📓 | EmojiAll ဗမာ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
👀အားလုံး Emojis 1814
🤐မျက်နှာ - ကြားနေ - သံသယ10
🤧မျက်နှာ - နေမကောင်း11
😸 (1F638) 😸အဓိပ္ပါယ်: ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာ
မူလနေရာ » အပြုံးများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု » ကြောင်မျက်နှာ
😸 အဆိုပါကွေးမျက်စိနှင့်တစ်ဦးကပြုံးကြောင်, က😄တစ်မူကွဲသည်နှင့်ပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူ😺ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဖျော်ဖြေမှုသို့မဟုတ်ကြောင်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာများကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
အီမိုဂျီသင်္ကေတ 😸 သည် ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာ ဖြစ်သည်က ကြောင်, ပြုံး, ပြုံးဖြဲဖြဲ, မျက်နှာ, မျက်လုံး နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်၎င်းကို Emoji အမျိုးအစားတွင်တွေ့နိုင်သည်။ "😂 အပြုံးများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု" - "😸 ကြောင်မျက်နှာ".
🔸 အဖေကနောက်ထပ် ၆ နာရီလောက်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ။ ဒါပေမယ့်သူအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူ့ဖိနပ်တွေကိုသူနွေးနေအောင်ထားပေးတယ်။ 😺
🔸 ကံကောင်းပါစေ 😺 ။ 😸
ဝီကီပီးဒီးယား: 😸 ကြောင် (တိရစ္ဆာန်)
ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကြောင်များသည် လူတွေရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးမှု ၊ ဦးစားပေးမှု ၊ ရက်စက်စွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု တို့ကိုခံရပြီး ကြောင်များ၏ ကံကြမ္မာဟာ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ကြောင်များဟာ အသိရခက်ခြင်းကြောင့် ကြောင်ချစ်သူ ကြောင်ပိုင်ရှင်များအဖို့တော့ စိတ်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ခွေးများက သူတို့ပိုင်ရှင် သူတို့ရဲ့ သခင်ကိုချစ်လျှင်ချစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားစွာပြတတ်ကြပေမယ့် ကြောင် များကိုတော့ ဘယ်အရာကိုမှအတင်းအကြပ်စေခိုင်းလို့မရပါဘူး။ သူတို့ဘာသာ သူတို့စိတ်ဆန္ဒ ရှိမှသာလျှင် သူတို့လုပ်ချင်ရာကိုလုပ်တတ်ကြတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားများပါပဲ။ ကြောင်ပိုင်ရှင် သခင်ကိုလည်း တွယ်ကပ်မနေကြဘဲ လွတ်လွတ်လပ်⁠လပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူများသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ အိမ်မှာ ကြောင်မွေးထားပြီဆိုလျှင် ကြောင်ပိုင်ရှင် ကြောင်သခင်များက ကြောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကြောင်များကသာ ကြောင်ချစ်သူ ကြောင်ပိုင်ရှင်ကို ပိုင်ဆိုင်သွားကြပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူတွေက အလိုအလျောက်ပဲ ကြောင်များ ရဲ့ အလိုကျ လိုက်လုပ်ပေးနေရတော့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ ဆာဝေါလ်တာစကော့တ်က “ကြောင်များဟာ လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ သတ္တဝါများဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ လိုအပ်ချက်တွေ အများအပြားရှိနေ တယ်လို့ ယူဆရတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ကြောင်များကို ကိုင်တွယ် မွေးမြူတဲ့အခါမှာ သတိရှိရပါမယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀ ကျော်လောက်ကတည်းက ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကြောင်အကြီးစားများဖြစ်ကြတဲ့ ကျား ၊ ခြင်္သေ့ များဟာ မီရာဆစ် (Miacids) အသားစားသတ္တဝါမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကြောင်ရိုင်းများကို မျိုးစိတ်အရ ဥရောပကြောင်ရိုင်း ၊ အာဖရိကကြောင်ရိုင်း ၊ အာရှကန္တာရကြောင်ရိုင်းဟု အမျိုးအစား (၃) မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ အီဂျစ်လူမျိုးများဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀⁠၀၀ ကျော်လောက်ကတည်းက ကြောင်များကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးမြူခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးများက ကြောင်များကို သီးသန့်နေရာပေးအလေးထားကာ မွေးမြူခဲ့ကြပါတယ်။ ကြောင်ဦးခေါင်း နဲ့ လူခန္ဓာကိုယ်ရှိသော နတ်ဘုရား Bast ကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကြောင်ကိုအီဂျစ်ဘာသာဖြင့် mau ဟုခေါ်ပြီး သိမြင်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ နေ့အချိန်မှာ ကြောင်တွေရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ နေအလင်းရောင်ကိုသိမ်းဆည်းထားကာ ညအချိန်မှာ လူသားတွေကိုဘေးရန်ကင်းရှင်းအောင် အလင်းရောင်ပြပေးတယ် လို့အယူရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်သေဆုံးသွားခဲ့လျှင် အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်များ အားလုံးက မိမိတို့ရဲ့ မျက်ခုံးမွေးများကိုအပြောင်ရိတ်ပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို ပြသတဲ့ဓလေ့ရှိခဲ့ပါ တယ်။ အဲ ဒီခေတ်အခါက အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ကြောင်တစ်ကောင်ကို သတ်လျှင် သေဒဏ် ပေးတဲ့ ဥပဒေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်အခါက ကြောင်များဟာ အခွင့်ထူးခံ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အလယ်ခေတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကြောင်များရဲ့ကံကြမ္မာ ဟာ အစစ အရာရာ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ကြောင်များအတွက် အဆိုးဝါးဆုံးကံကြမ္မာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်များဟာ စုန်း ၊ တစ္ဆေ များရဲ့ အပေါင်းအဖော်များဖြစ်ကြပြီး စုန်း တစ္ဆေ များရဲ့ ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြတယ်လို့ အယူသီးခဲ့ကြပါတယ်။ စုန်း ၊ တစ္ဆေ များက သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ကြောင်များအယောင်ဆောင်ထားပြီး လူတွေကိုလှည့်စား နေခဲ့ကြတယ်လို့ အယူရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်ကြောင်များဟာ မကောင်းဆိုးဝါးများဖြစ်တယ် လို့အယူရှိကြပြီး ကြောင်အနက်များကို သတ်ပစ်လေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စိန့်ဂျွန်ပွဲတော် (Saint John Festival) မှာအနက်ရောင်ကြောင်များကို အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်တဲ့ ဓလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ ဒီနေ့ခေတ် အချိန်အခါကစပြီး အနက်ရောင်ကြောင်များဟာ မကောင်းဆိုးဝါးများ လို့ အချို့သောလူများက ဆက်လက်အယူသီးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပတိုက်မှာ ကြောင်များကိုညှင်းဆဲသတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာပဲ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာတော့ ကြောင်များဟာ နှစ်သက်ဖွယ်ရာ အိမ်မွေးအကောင်လေးများ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ၁၈ ရာစုအရောက်မှာတော့ ဥရောပမှာကြောင်များရဲ့ကံကြမ္မာ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်များကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်မွေးမြူလာခဲ့ကြပြီး လူအများရဲ့ နှစ်သက်ချစ်ခင်ခြင်းကို ကြောင်များရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှာ United Kingdom ရဲ့ Central Palace မှာ ကြောင်ပြပွဲကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ကြောင်များကိုခွေးထက်ပို မွေးမြူလာကြပြီး ကြောင်များဟာ လူတွေရဲ့ အချစ်တော် လေးများအဖြစ် ရေပန်းစား လျက်ရှိနေပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်လေ့လာမှုတွေအရ ကြောင်များကိုအိမ်မှာမွေးမြူထားခြင်းဖြင့် ကြောင်ပိုင်ရှင်လူတို့အတွက် စိတ်တင်းကြပ်မှု ၊ စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ သွေးတိုးရောဂါများ ကို လျော့ပါး သက်သာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြောင်တစ်ကောင်ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အဖြစ် မွေးမြူ ထားခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါကို လျော့ပါးသက်သာစေတာ ကိုစမ်းသပ်မှု တွေအရ အထင်အရှား တွေ့ရပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံး[[အိမ်မွေးကြောင်အမျိုးအစားကတော့ အဖြူရောင် နဲ့အနက်ရောင် နှစ်ရောင်စပ်တဲ့ (Moggie) ကြောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အနက်ရောင်ကြောင် နဲ့တက်ဘီကြောင် (Tabby Cat) အမျိုးအစားများကလည်း ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ Siamese လို့ခေါ်တဲ့ ယိုးဒယားကြောင်အမျိုးအစားက ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှာ လူသိများလာပါတယ်။ ဝေါ့လ်ဒစ္စနီရဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ The Lady and the Tramp မှာ Siamese ကြောင်များဟာ ဗီလိန်ဇာတ်ဆောင်များအဖြစ်ပါဝင်နေတာကြောင့် ကြောင်ချစ်သူများက မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကြောင်များဟာ အသိဉာဏ်မြင့်မားပြီး စူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်စာရေးဆရာမ Collette က သူမရဲ့အချစ်တော်ကြောင်လေးအကြောင်းကို - ကျွန်မရဲ့ ကြောင်လေးက သူ့ကို ကျွန်မက တလေးတစား ဆက်ဆံပြောဆိုသလိုမျိုး ကျွန်မကိုပြန်လည်မဆက်ဆံပါဘူး- လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်တွေဟာမိန်းမတွေအတွက်ချစ်ခင်စရာဖြစ်ပြီး ခွေးများဟာ ယောက်ျားများချစ်ခင်တဲ့ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ရှေးဟောင်းဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်လည်း ဆာဝင်စတန်ချာချီ ၊ မာ့ခ်တွိင် ၊ ဆာအိုင်းဇက်နယူတန် ၊ သမ္မတကြီး အေဗရာဟမ်လင်ကွန်း စတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အမျိုးသားများဟာ ကြောင်ချစ်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ အလက်ဇန်းဒါးသည်ဂရိတ် ၊ ဂျုးလိယပ်စ်ဆီဇာ ၊ ဂျင်ဂစ်ခန် ၊ နပိုလီယန်ဘိုနာပါတ် နဲ့ အဒေါ့ဟစ်တလာ တို့ကတော့ ကြောင်မုန်းတီးသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုင်စိုးလို သူ များဖြစ်ကြပြီး အင်မတန်ခေါင်းမာကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကြောင်တွေရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ကြောင်တွေကလည်းကြောင်ချစ်သူများကိုသာချစ်ခင်တတ်ကြပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူများ ကလွဲလို့ကြောင်များရဲ့ ချစ်ခင်မှုကိုမရနိုင်ကြပါဘူး။ ကမ္ဘာကျော်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးစာရေးဆရာကြီး ချားလ်စ်ဒစ်ကန်က ကြောင်တစ်ကောင်ကို ချစ်ရတာလောက် ကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်ကြီးမရှိပါဘူး လို့ပြောခဲ့တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကြောင်များနဲ့လူများ အကြားမေတ္တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူများဟာ စိတ်နှလုံးသိမ်မွေးနူးညံ့တတ်ကြပြီး စာပေ ၊ အနုပညာကို နှစ်သက် တတ်သူများဖြစ်တယ် လို့ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကြောင်သည် ခွေးကဲ့သို့ လူနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး နေထိုင်သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခွေးနှင့်ကြောင်တို့၏ အပြု အမူများမှာ လုံးဝမတူကြချေ။ ခွေးသည် မိမိအရှင်သခင်၏ ပစ္စည်းဥစ္စာကို အသက်စွန့်၍ စောင့်ရှောက်ကာကွယ်တတ်သည်။ သခင်အပါးမှ ထက်ကြပ်မကွာ လိုက်တတ်သည်။ သခင်အား အမြီးနန့်လျက် အားရဝမ်းသာ ခရီးဦးကြိုလည်း ပြုတတ်သည်။ ထိုသို့ ကျေးဇူးသိတတ်မှုကြောင့် လူတို့၏ ခင်မင်အားကိုးခြင်း ကို ခံယူရပေသည်။ ကြောင်မှာမူ သခင်အပါးသို့ မချဉ်းကပ်၊ အမြီးနန့်ခြင်း၊ ကြိုဆိုခြင်းလည်း မလုပ်တတ်ပေ။ ကြောင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်းမှာ လူတို့၏အယုအယ ကို ခံယူလိုသောကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။ အိမ်တွင်နေသည့်အခါ များသောအားဖြင့် နွေးသောနေရာမျိုးတွင် ချောင်ကုပ်၍ နေတတ်သည်။ လူတို့နှင့် များစွာရင်းနှီး ရောနှောခြင်းမရှိ။ အကယ်၍ ရောနှောနေပြန်ကလည်း ခင်မင်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ များသောအားဖြင့် စားစရာတစ်ခု⁠ခုကို အလိုရှိ၍သော်၎င်း၊ လူတို့၏ကိုယ်ငွေ့ကို ခံယူလို၍သော်၎င်း၊ နေခြင်းသာ ဖြစ် သည်။ လူတို့ကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်း မရှိလှပေ။ ကြောင်သည် အိမ်တွင် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးနေသော ကြွက်များကို ဖမ်းဆီး တတ်သည်။ သို့သော် သူ့ဆန္ဒအလျောက် ဖမ်းယူခြင်းမျှသာ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ပင် 'ခွေးသည် လူကိုခင်၍၊ ကြောင်မှာ အိမ်ကိုသာ ခင်သည်'ဟု ဆိုစမှတ်ပြုကြ ပေသည်။ ကြောင်ကား သားရဲတိရစ္ဆာန် မျိုးရင်းကြီးထဲက ဖြစ်၏။ ခြင်္သေ့နှင့် ကျားတို့မှာ ကြောင်၏ မျိုးရင်းဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကြောင်သည် အိန္ဒြေကြီးလှလျက် မိမိ၏ဇာတိ မာန်ကိုလည်း မဖျောက်နိုင်ဘဲ၊ အခွင့်ကြုံမည့်အခါများတွင် အစွမ်းပြလေ့ရှိသည်။ ကြောင်၏မျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှာ အထူးသဖြင့် အမဲလိုက် ကောင်းလေသည်။ ကြောင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ကို ကြည့် လျှင်လည်း အမဲလိုက်ရာ၌ လျင်မြန်ပေါ့ပါးအောင် သဘာဝက ဖန်တီးပေးထားပုံကို တွေ့နိုင်သည်။ ကြောင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို လေ့လာလျှင် လုံးသောဦးခေါင်း၊ ရှည်လျားသေးသွယ်သောကိုယ်၊ တိုတုတ် သန်မာသော ခြေ လက်၊ အဖျားသွယ်သော အမြီးတို့ကို တွေ့ရပေမည်။ ခြေဖဝါး အောက်တွင် လမ်းလျှောက်သည့်အခါ အသံမကြားရအောင် ပျော့ပျောင်းသောအသားဖု ခံထားလျက်ရှိသည်။ ကြောင်လက် သည်းများမှာ ထက်မြက်မာကြော၍ အသုံးမလိုသည့်အခါ ဝှက် ထားနိုင်သည်။ ကြောင်တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အထူးမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည် မှာ မျက်စိဖြစ်၏။ မျက်စိအတွင်းရှိ သူငယ်အိမ်သည် နေ့ခင်း ဖက် အလင်းရောင်အားကြီးသည့်အချိန်၌ မျှင်⁠မျှင်ကလေး သေး သွယ်သွယ် ကျဉ်းမြောင်းသွား၏။ ညဖက်မှောင်မိုက်သည့်အချိန် တွင်မူ ကျယ်ဝန်းကြီးမားကာ ဝိုင်းစက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ကြောင်သည် ညဖက်တွင် အရာဝတ္ထုများကို ကောင်းစွာမြင်နိုင် သည်။ သို့သော် လုံးဝမှောင် မဲနေသည့်နေရာ၌ကား မြင်နိုင် စွမ်း မရှိချေ။ ကြောင်၏နှုတ်ခမ်းမွေးများမှာ အတွေ့အထိကို စမ်းသပ်နိုင်သည့် အင်္ဂါတစ်မျိုးပင် ဖြစ်လေသည်။ ကြောင်သည် ခွေးနည်းအတူ ခြေဖျားထောက်၍ လမ်း လျှောက်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် ခွေးကဲ့သို့ အပြေးမသန်လှ။ အပြေးမသန်လှသော်လည်း ရန်သူလိုက်၍ ပြေးရသော အချိန် မျိုးတွင် သစ်ပင်ပေါ်သို့ တက်ပြေးခြင်းဖြင့်၊ နံရံတံတိုင်းတစ်ခု⁠ခု ပေါ်သို့ ခုန်တက်ခြင်းဖြင့်၎င်း၊ လွတ်အောင် ရှောင်တိမ်းနိုင် သည်။ အလွန်ပေါ့ပါး လျင်မြန်သောခွေးပင်လျှင် ကြောင်ကို တော်ရုံလောက်နှင့် မိအောင် မလိုက်နိုင်ပေ။ ကြောင်သည် ခွေးလောက် သင်လွယ်တတ်လွယ်လှသော တိရစ္ဆာန်မဟုတ်သော်လည်း လိမ်မာပါးနပ်၏။ ငယ်ရွယ်စဉ်က စ၍ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးလျှင် ကြီး ပြင်းလာသည့်တိုင်အောင် ကောင်းစွာ မှတ်သားလိုက်နာတတ် လေသည်။ ကြောင်တွင် အထူးသဖြင့် အမြင်၊ အတွေ့၊ အကြား အာရုံများ အလွန်ထက်သန်၍ ဝေး⁠ဝေးက ကြွက်၏ခြေသံကို ကောင်းစွာကြားနိုင်၏။ ကြောင်မျိုးရင်းထဲတွင် ကျား၊ ကျားသစ်၊ ခြင်္သေ့၊ တောကြောင် စသည်တို့ ပါဝင်ကြသည်။ ယင်းတို့အနက် အချို့၌ အမြီးတိုသည်။ အချို့မှာ အမြီးလုံးဝ မပါသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ကြောင်အနွယ်ဝင် တိရစ္ဆာန်အားလုံးတို့၏ အမူ အကျင့်တို့မှာ အတူတူပင် ဖြစ်ကြသည်။ ကျားနှင့် ခြင်္သေ့တို့မှ လွဲလျှင် ကြောင်မျိုးရင်ဝင် အားလုံးသည် သစ်ပင်အတက် ကောင်းသည်သာ များသည်။ ကြောင်မျိုးရင်းဝင် အားလုံးသည် ညအချိန်၌ အစာရှာရန် ပိုမိုနှစ်သက်ကြ၍၊ သားကောင်ကို ပုန်းကွယ်ကာ ရုတ်တရက် ခုန်အုပ်ပြီး ဖမ်းလေ့ရှိသည်၊ အစာရှာ ထွက်ရာ၌ အဖော်မပါဘဲ တစ်ကောင်တည်း ထွက် တတ်သည်။ အိမ်ကြောင်များနှင့် အမျိုးတော်စပ်သော တောကြောင်ရိုင်း များကို ဩစတြေးလျတိုက်မှလွဲလျှင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိုက်အသီး သီး၌ပင် အနှံ့အပြားတွေ့ရသည်။ ကြောင်အမျိုးဝင် တိရစ္ဆာန်တို့ သည် သားတစ်ခါမွေးလျှင် အမျိုးအစားကိုလိုက်၍ ၂ ကောင်မှ ၇ ကောင်အထိ မွေးတတ်သည်။ ခြင်္သေ့များကား တစ်ကြိမ်မွေး လျှင် ၂ ကောင် ၃ ကောင်ထက် ပို၍ မမွေးတတ်ကြပေ။ အကောင်ကလေးများသည် အချို့အမျိုးတို့တွင် မျက်စိပွင့်လျက် သား မွေးကြ၍၊ အချို့အမျိုးမှာမူကား ၉ ရက်ခန့်ကြာမှ မျက်စိ ပွင့်လာကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ယဉ်ပါးသော အိမ်ကြောင်များ၏ ဇာစ်မြစ်ကို စိစစ်ရာတွင် သိပ္ပံကဝိအများပင် အချင်းချင်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် သဘောအယူအဆ မတူညီကြပေ။ထိုကြောင်များ၏ ဇာစ်မြစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှေးအကျဆုံးသော အထောက်အထား ကို အီဂျစ်နိုင်ငံ၌ ကြောင်များသည် ရှေးနှစ်ပေါင်း ၃ဝ⁠ဝဝ ခန့် ကပင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ ကြောင်အမျိုးအနွယ်ကို အာဖရိကတိုက်တွင် ယခုတိုင် တွေ့ရှိနိုင်သေးသည်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးတို့သည် ကြောင်ကို အစွဲအလမ်း အလျောက် ထူးဆန်းစွာ ကြောက်ရွံ့ လေးစားကြသည်။ ကြောင် ကို အိမ်သားတစ်ယောက်ပမာ ပြုစုယုယကြ၏။ ရှေးခေတ် အီဂျစ်အဆောက်အအုံပျက်များအောက်တွင် ဆေးစိမ်ထားသော ကြောင်အလောင်းများကို မကြာခဏ တွေ့ရလေသည်။ ရှေး ခေတ် ခရစ်ယာန်တို့သည်လည်း စုန်းနှင့် ကြောင်နက်ရုပ်ပုံဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိကြသည်။ ယဉ်ကျေးသော တိုင်းပြည်ကြီးများမှာပင် ကြောင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထူးဆန်းသော အစွဲအလမ်းများ ယနေ့အထိ ရှိကြသေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌မူ ကြောင် တစ်ကောင်လုံး နက်လျှင် ကာယသိဒ္ဓိအတွက် ကောင်းသည်ဟု အဆိုရှိသည်။ အိမ်ကြောင်အမျိုးမျိုးတွင် ယိုးဒယားကြောင်မှာ အရှားပါး ဆုံးနှင့် အဖိုးအတန်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ မျက်နှာ ခြေလက် နှင့် အမြီးတို့မှာ အညိုရောင်ဖြစ်၍၊ ကိုယ်မှာ ဆွတ်ဆွတ် ဖြူလျက်၊ မျက်စိမှာ ပြာလဲ့လဲ့အရောင် သန်းလျက်ရှိသည်။ အန်ဂိုးရား သို့မဟုတ် ပါးရှင်းကြောင်မျိုးသည် အရွယ်ကြီးမား သောကြောင့်၎င်း၊ ရှည်လျား၍ သိုးမွေးကဲ့သို့သော အမွှေးများ ရှိသောကြောင့်၎င်း၊ အသားရောင်ရှိသော နှုတ်ခမ်းနှင့် ခြေဖဝါး လက်ဖဝါးများ ရှိသောကြောင့်၎င်း ထင်ရှားသည်။ စပိန်နိုင်ငံ တွင် လိပ်ခွံကွက်ကြောင်မျိုးကို အသိဉာဏ်ကောင်းသောကြောင့် အလွန်လူကြိုက်များသည်။ ကြောင်ထဲတွင် အိုင်းအော့မန်းကျွန်း မှ မန့်ကြောင်မျိုးမှာ အမြီး လုံးဝမရှိသည့်အတွက် အကျည်း တန်ဆုံး ဖြစ်၏။ ကြောင်သည် ရေကိုကြောက်၏။ သို့သော် တိရစ္ဆာန် အပေါင်းတွင် ကြောင်လောက် သန့်ရှင်းသော အမျိုးမှာ မရှိ သလောက်ရှားသည်။ ကြောင်သည် မိမိ၏အမွေးအမျှင်များကို လျှာဖြင့် အထပ်ထပ်လျက်၍ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ အကယ်၍ ကြောင်တစ်ကောင်တွင် အမွေးအမျှင်များ သပ်ယပ် စင်ကြယ်ခြင်း မရှိလျှင် ထိုကြောင်ကို မကျန်းမမာဖြစ်နေပြီဟု သိအပ်၏။ မိခင်ဖြစ်သော ကြောင်မကြီးသည် မိမိ၏ သားငယ် များကို လျှာဖြင့် မရမက လျက်ပေးခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ် စေတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကြောင်ကလေးများကို လှပသော ကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ အမြဲမပြတ် မြူးတူးခုန်ပေါက်၍ ဆော့ နေတတ်သောကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ လူတိုင်းပင် ချစ်နှစ်သက် ကြသည်။ ယင်းတို့သည် ငယ်စဉ်မှ စ၍ သားကောင်ချောင်း ဖမ်းသောအကျင့်ကို အလိုအလျောက် ရရှိလာကြသည်။ ကြောင်တို့သည် မွေးရှည်၊ မွေးတို၊ အဖြူ၊ အနက်၊ မြီးရှည်၊ မြီးတို စသည်ဖြင့် အမျိုးများပြားကြသည်။ အချို့ ကြောင်များမှာ ၂ မျိုး ၃ မျိုး ရောစပ်ထားသော ကြောင်မျိုးစပ် များ ဖြစ်ကြ၏။ ယင်းတို့အနက် အမွေးတိုသော ကြောင်မျိုးမှာ အကြမ်းခံနိုင်ရည် အရှိဆုံးနှင့် ကြွက်လိုက်အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ 🔗 ကြောင် (တိရစ္ဆာန်)
🌐: قط, Ev pişiyi, Котка, বিড়াল, Mačka, Kočka domácí, Kat, Hauskatze, Γάτα, Cat, Felis silvestris catus, Kass, گربه, Kissa, Chat, חתול הבית, बिल्ली, Domaća mačka, Macska, Kucing, Felis silvestris catus, ネコ, შინაური კატა, Мысық, 고양이, Katė, Kaķis, Kucing, Kat (dier), Tamkatt, Kot domowy, Gato, Pisică de casă, Кошка, Mačka domáca, Domača mačka, Macja, Мачка, Katt, แมว, Kedi, Кіт свійський, Mèo, 猫.
📊ခေါင်းစဉ် / Trend ဇယား
နေ့စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 585 103
အပတ်စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 704 42
လစဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 728 81
နှစ်စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 680 38
🇲🇴 မကာအို 95 2
😸 (1F638) အချိန်ကျော်လူကြိုက်များအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | emojiall.com 100 75 50 2502017 2018 2019 2020 2021
ရက်စွဲအပိုင်းအခြား: 2016-04-17 - 2021-04-04
အချိန်အသစ်ပြောင်းပါ: 2021-04-13 17:20:45 UTC
😸 ဆက်ဆံရေးဇယား | emojiall.com0ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာ😸 1 ပြုံးနေသည့်မျက်လုံးများဖြင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ😄2ပြုံးဖြဲဖြဲလုပ်နေသော ကြောင် မျက်နှာ😺3ပျော်ရွှင်မှု မျက်ရည်များဖြင့် မျက်နှာ😂4ကြောင်🐈5ကြောင်ရုပ်🐱6ပျော်ရွှင်မှု မျက်ရည်များဖြင့် ကြောင် မျက်နှာ😹7ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြုံးနေသော ကြောင် မျက်နှာ😼 8 ငိုနေသော ကြောင် မျက်နှာ😿9ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ😀 10 ငိုနေသော မျက်နှာ😢 11 ခွေးရုပ်🐶 12 မြေခွေးရုပ်🦊 13 မြီးတိုပါးတွဲကြွက်ရုပ်🐹 14 ခွေး🐕 15 ချပ်ပြားဝိုင်း ပစ်🥏 16 တိရိစ္ဆာန် ခြေရာ🐾 17 ခြင်္သေ့ရုပ်🦁 18 ကြွက် မျက်နှာ🐭 19 အနက်ရောင်နှလုံးသား🖤 20 အခေါင်းတလား⚰ 21 ဝမ်းနည်းသော်လည်း စိတ်အေးရသည့် မျက်နှာ😥
😸 တိမ်တိုက် | emojiall.com 14 မျက်စိမှိတ်ထားကာ နမ်းနေသည့် ကြောင် မျက်နှာ 14 မျက်စိမှိတ်ထားကာ နမ်းနေသည့် ကြောင် မျက်နှာမျက်... 13 ပြုံးနေသည့်မျက်လုံးများဖြင့် ပီတိဖြာနေသော မျက်နှာ 13 ပြုံးနေသည့်မျက်လုံးများဖြင့် ပီတိဖြာနေသော မျက်နှာပြုံ... 12 ရူးနှမ်းနှမ်းမျက်နှာ 12 ရူးနှမ်းနှမ်းမျက်နှာရူးနှ... 11 ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ 11 ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာပြုံ... 10 ငိုနေသော ကြောင် မျက်နှာ 10 ငိုနေသော ကြောင် မျက်နှာငိုနေ...9ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြုံးနေသော ကြောင် မျက်နှာ9ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြုံးနေသော ကြောင် မျက်နှာခနဲ့တဲ... 8 ပျော်ရွှင်မှု မျက်ရည်များဖြင့် ကြောင် မျက်နှာ 8 ပျော်ရွှင်မှု မျက်ရည်များဖြင့် ကြောင် မျက်နှာပျော်ရ...7ကြောင်ရုပ်7ကြောင်ရုပ်ကြောင်...6ကြောင်မျက်နှာ6ကြောင်မျက်နှာကြောင်...5အပြုံးများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု5အပြုံးများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြုံးမ...4မျက်နှာ4မျက်နှာမျက်နှာ3ပြုံးဖြဲဖြဲ3ပြုံးဖြဲဖြဲပြုံးဖြ...2ပြုံး2ပြုံးပြုံး 1 ကြောင် 1 ကြောင်ကြောင်0ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာ0ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာပြုံးနေသော...
နာမည်အတိုကောက်: ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာ
Apple နာမည်: Grinning Cat Face
ယူနီကုတ်ဗားရှင်း: 6.0 (2010-10-11)
အမျိုးအစားများ: 😂 အပြုံးများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု
အမျိုးအစားခွဲများ: 😸 ကြောင်မျက်နှာ
သော့ချက်စာလုံးများ: ကြောင် | ပြုံး | ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာ | ပြုံးဖြဲဖြဲ | မျက်နှာ | မျက်လုံး
👨‍💻ယူနီကုတ် သတင်းအချက်အလက် (အဆင့်မြင့်အသုံးပြုမှု)
😹ပျော်ရွှင်မှု မျက်ရည်များဖြင့် ကြောင် မျက်နှာ
😼ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြုံးနေသော ကြောင် မျက်နှာ
😿ငိုနေသော ကြောင် မျက်နှာ
😁ပြုံးနေသည့်မျက်လုံးများဖြင့် ပီတိဖြာနေသော မျက်နှာ
😽မျက်စိမှိတ်ထားကာ နမ်းနေသည့် ကြောင် မျက်နှာ
😺ပြုံးဖြဲဖြဲလုပ်နေသော ကြောင် မျက်နှာ
😃မျက်လုံးပြူးဖြင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
😄ပြုံးနေသည့်မျက်လုံးများဖြင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
😆မျက်စိကို ကြိတ်မှိတ်ထားသည့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
😊မျက်လုံးများ ပြုံးနေသည့် အပြုံးမျက်နှာ
🙀ငြီးငွေ့နေသော ကြောင် မျက်နှာ
Emoji 😸 ဘယ်လိုမွေးဖွားတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ သင်လိုချင်သော Emoji ကိုဖန်တီးရန်အဆိုပြုလွှာကိုမည်သို့တင်သွင်းရမည်နည်း။
နာမည်အတိုကောက် & အချိတ်အဆက် (အခြားစာမျက်နှာတစ်ခုခုသို့ ဆက်သွယ်ထားခြင်း)
ချက် 😸 šklebící se kočka s usměvavýma očima
ဂျာမန် 😸 grinsende Katze mit lachenden Augen
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ 😸 grinning cat with smiling eyes
တူရကီ 😸 gülen gözlerle sırıtan kedi
အီတလီ 😸 gatto che sogghigna
ဟန်ဂေရီ 😸 nevető macska mosolygó szemmel
ပေါ်တူဂီ၊ နိုင်ငံတကာ 😸 rosto de gato sorrindo com olhos sorridentes
ပြင်သစ် 😸 chat qui sourit avec des yeux rieurs
စပိန် 😸 gato sonriendo con ojos sonrientes
ဂျပန် 😸 にやっと笑う猫
💬မှတ်ချက် :0လက်ရှိဘာသာစကား
♍ကန် ♏ဗြိစ္ဆာ ♟️နယ်စား 🇨🇿အလံ − ချက်ကီယား 🇹🇭အလံ − ထိုင်း
ပြုပြင်မွမ်းမံ: 2021-04-15 01:00:02 UTC
🙏 သင်္ချိုင်း - သိမ်းကျုံးနေ့, Qingming က
🦠 COVID-19, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်